Hay'adda Isgaarsiinta Qaranka oo ballaarineysa hanaanka helitaanka furaha internet-ka dalka - Halbeeg News
Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka oo ballaarineysa hanaanka helitaanka furaha internet-ka dalka
Maareeyaha Guud ee Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka, Mudane Cabdi Sheekh Axmed, ayaa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in maanta la soo gaaray waqti ay SONIC – oo maamusha astaanta internetka ee dalkeena – ay si daah furan u qaadaneyso shirkado gudaha dalka ka shaqeeya oo diiwaangeliya astaanta.
Maareeyaha ayaa sheegay in tan iyo bishii Maarso ee sanadkan ay Hay’addu ku hawlaneyd sidii loo casriyeyn lahaa astaanta oo looga soo guuri lahaa shirkaddii hore ee adeegga farsamo siin jirtay (Cloud Registry), looguna soo guuri lahaa barnaamij ay SONIC 100% maamuleyso, oo dalka gudahiisana ay u yaallan xog-keydiyeyaal (servers), taas oo si kordhin doonta adeegga iyo xawaaraha. SONIC ayaa haatan ku shaqeysa barnaamijka Cocca oo ay adeegsadaan inta badan dalalka ugu horreeya dhinaca astaamaha ee qaaradaha Afrika iyo Aasiya.
Waxaa sidoo kale la dajiyay siyaasadihii lagu dhaqi lahaa maamulka astaanta, kuwaasoo kala qeexaya waajibaadka dhammaan dhinacyada ay khuseyso.
Maareeyuhu wuxuu intaas ku daray in qorshuhu yahay in isbeddelladii lagu sameeyay astaanta ay dhaqan-gali doonaan wixii ka dambeeya bisha Jannaayo 2019, lana sameyn doono bandhig iyo wada-tashiyo lala yeelan doono dhammaan daneeyeyaasha ay khuseyso.
Isbeddellada la filayo inay dhaqan galaan ayaa waxaa ka mid ah in la kordhiyo tirada shirkadaha dalka ku yaalla ee adeeggan bixiya, lana sameeyo qiimo-dhimis si loo sii xoojiyo adeegsiga astaanta ee dadweynaha, shirkadaha, jaamacadaha iyo hay’adaha sama-falka.
“Maanta waxaan soo gaarnay in dotSO ay ku soo wareegtay dalka gudihiisa, lana qaadanayo shirkado Soomaaliyeed oo adeeggaas gaarsiiya magaalo kasta oo ka mid ah dalka, maadaama awal ay aad u koobnaayeen shirkadaha diiwaangeliya ee dalka ka shaqeeya, hase yeeshee lala sugayo in la sameeyo nidaam daah-furan oo lagu qaato kuwa cusub ka dib marka hawlaha farsamadu ay soo dhammaadaan,” ayuu yiri Maareeyaha Hay’adda Isgaarsiinta Qaranka.
Madaxeyne Farmaajo: Soomaaliya waxay diyaar u tahay iskaashiga iyo maalgashiga badda
Ciidamada ammaanka Koonfur Galbeed oo heegan la geliyay